Aayaha editorNovember 23, 2020
Waa wax ay naftu u baahantahay In lamaanahaagu kuu sheego inuu ku jecelyahay. Waxaa laga yaabaa inaad si aad ah ugu baahantahay inaad maqasho iyagoo leh (Waanku Jeclahay) si aad ugu dambeyntii u dareento sida dhabta ah ee lamaanahaagu kuu jecelyahay, badanaa haddii aad jeceshahay qofkaas.
Sidee ku ogaan kartaa gabadha ku jecel ama wiilka ku jecel.
Halkii aad si joogto ah uga walwali lahayd in lagu jecelyahay iyo inkale, Halkan ka akhriso calaamadaha muhiimka ah ee aad eegi karto si aad u ogaato in lammaanahaagu jacayl kuu qaaday.
Marka lammaane uu si joogto ah u qiimeeyo dadaalkaaga iyo waxyaabaha aad u sameyso isla markaana uu ka mahad celiyo haddii ay noqon lahayd inaad garab istaagtay markii ay dhibaatada heysay ama aad hadiyad u keentay, mahadnaqooda isdaba jooga ah ayaa ah tilmaan jaceyl.
Marka qofku uu ku mahadiyo inaad qeyb ka tahay noloshiisa isla markaana uusan ka xishoon inuu muujiyo sida uu ugu faraxsanyahay ama ugu qanacsanyahay qofkaas, taasi waa calaamad muujineysa inuu qofkaas si weyn ugu qanacsanyahay inaad lamaanihiisa noqoto.
2. Si kalsooni leh ayay wax walba kuugu sheegaan
Marka lamaanahaagu si qoto dheer kuu jecelyahay, waxay had iyo jeer wax badan kaaga sheegayaan naftooda. Haddii lammaanahaagu uusan ka baqayn inuu ku siiyo macluumaad qaar ah oo ku saabsan naftooda, waa inaad u fiirsataa taas maadaama qof aan jacayl kuu qabin uusan kuu sheegi doonin arrimahaas.
Marka lamaanahaagu isku kaa furfuro ama wax kasta uu si kalsooni leh kuugu sheego isla markaana uu ku qanacsanyahay inuu si waadax ah uga hadlo dhinacyo kala duwan sida sooyaalkoodii hore, qoyskooda ama sheekooyin kale oo shaqsiyadeed, lamaanahaaga wuxuu isku dayayaa inuu kalsooni weyn ku galiyo, sidaa darteed qofkaas waa ku jecelyahay ee ilaali.
3. Aaminaad buuxda
Aaminaaddu waa aasaaska xiriir kasta. Haddii aad shaki ka qabto in lammaanahaaga runti uu ku jecelyahay, tilmaan kale ayaa ah inay si buuxda kuu aaminaan.
4. Waxay Doonayaan Inay Waqti Tayo leh kula Qaataan
Markuu qof jacayl galo, wuxuu sameyn doonaa wax kasta si uu waqti kuula qaato. Wuxuu had iyo jeer rabaa in maalmaha fasaxa waqtigiisa uu agtaada kusoo qaato.
Qofka ku jecel ayaa raadiya fursado si uu kuu arko sababtoo ah inuu ku arko oo uu waqti kula qaato ayaa wax walba uga qaalisan.
5. Way ku farxaan inaad mustaqbalka wadajir noqotaan
Tilmaan kale ayaa ah in lammaanahaagu had iyo jeer doonayo inuu kula sameeyo qorshooyin muddo dheer ah wuxuuna si furan uga hadli doonaa riyooyinka mustaqbalka xiriirkiina.
Markuu qofku ku jecelyahay, kama baqi doono inuu qorsheyaal kula sameeyo.